News | Sandeep Lamichhane
News | Tag: Sandeep Lamichhane
काठमाडौँ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)– २०१९ चलिरहेको बेला नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने कसरी चर्चाबाट टाढा रहन सक्छ ? उनको टिम दिल्ली क्यापिटल्सले ठिकै खेलिरहेको छ र लिग चरणको शीर्ष तीनमा छ । दिल्लीको प्रत्येक खेलअघि नेपालीहरुमा उत्सुकता हुन्छ– के आज दिल्लीले सन्दिपलाई मैदानमा उतार्छ ?
पिएसएल खेलेर सन्दीप स्वदेश फर्कँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर आज स्वदेश फर्कँदै छन् ।
टी–१० क्रिकेट लिगः पहिलो खेलमै सन्दीप ‘प्लेयर अफ दी म्याच’
काठमाडौं । युएईमा जारी टी–१० क्रिकेट लिगको पहिलो खेलमा नै नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछाने ‘प्लेयर अफ दी म्याच’ घोषित भएका छन् ।
सन्दिप लामिछानेले दिल्लीबाटै २०१९ को आईपीएल खेल्ने
काठमाडौं । सन् २०१९ को भिभो इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)मा नेपालका खेलाडी सन्दिप लामिछानेले दिल्ली डेयरडेभिल्सबाटै खेल्ने भएका छन् । क्लबले बिहीबार जारी गरेको स्वाडमा नेपालका सन्दिप पनि परेका छन् । दिल्लीले सन्दिपलाई रिटेन गरेको हो ।
क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई कारबाही
काठमाडौं । पोखरामा जारी पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) मा सन्दिप लामिछाने कारबाहीमा परेका छन् । टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा सन्दीपले खेलको दौरान अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसिसी) को नियम उल्लंघन गरेको भन्दै आयोजकले उनलाई कारबाही गरेको हो ।
सन्दिपले अस्ट्रेलियाको बिग बास क्रिकेट लिग पनि खेल्ने
काठमाडौं । नेपालका युवा बलर सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियाको बिग बास क्रिकेट लिग खेल्ने भएका छन् । उनलाई मेलबर्न स्टार्सले आउँदो सिजनका लागि लिएको हो ।